RASMI: Mats Hummels oo ka tagaya Bayern Munich & kooxda uu ku biirayo oo la shaaciyay – Gool FM
RASMI: Mats Hummels oo ka tagaya Bayern Munich & kooxda uu ku biirayo oo la shaaciyay
Dajiye June 19, 2019
(Germany) 19 Juunyo 2019. Borussia Dortmund ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday xoogaa yar kahor inay kala soo saxiixatay daafaceedii hore ee xulka qaranka Germany Mats Hummels kooxda Bayern Munich.
Borussia Dortmund ayaa warbixin rasmi ah ay ku daabacday website-keeda iyo sidoo kale boggageeda rasmiga ah sida Facebook iyo Twitter waxay ku xaqiijisay in Mats Hummels uu markale ku soo laabtay safka kooxdeeda.
Qaar ka mid ah warbaahinta Jarmalka ayaa waxay shaaca ka qaadeen faahfaahinta heshiiska uu markale dib ugu soo laabtay Mats Hummels kooxda Borussia Dortmund.
Wargeyska “Bild” ayaa sheegay in daafaca reer Germany ee Mats Hummels uu saxiixay qandaraas seddex sanno ah oo ay la galeen kooxda ku ciyaarta garoonka Signal Iduna Park.
Sida laga soo xigtay wararka qaar, qiimaha uu heshiiska ku kacay ayaa ah ku dhawaad 31.5 milyan euro lagu daray qaar ka mid ah lacagaha kala ee dhiiragalinta taasoo gaari doonta wadarta guud ee 38 milyan euro.
Mats Hummels ayaa ku soo laabtay gurigiisii hore ee Borussia Dortmund, kaasoo uu ku qaatay mudo dhan 7 sano inta u dhexeesay 2007 ilaa iyo 2016, kahor inta uusan u dhaqaaqin Bayern Munich.
RASMI: Kyle Walker oo heshiiska u kordhiyay kooxdiisa Manchester City
RASMI: Xulka qaranka Spain oo loo magacaabay macalin cusub, kaddib markii uu ka tagay Luis Enrique